राती सुत्ने समयमा यो ठाउँमा दल्नुहोस् काँचो आलु मिल्नेछ नसोचेको फाइदा – List Khabar
Home / जीवनशैली / राती सुत्ने समयमा यो ठाउँमा दल्नुहोस् काँचो आलु मिल्नेछ नसोचेको फाइदा
राती सुत्ने समयमा यो ठाउँमा दल्नुहोस् काँचो आलु मिल्नेछ नसोचेको फाइदा
admin October 29, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 106 Views
आ’जको वर्तमान स’मयमा, प्रत्येक व्यक्ति सबैभन्दा सुन्दर देख्न चाहन्छन्, तर बढ्दो वायु प्रदूषण र व्य’क्तिको तनावको कारण, छा’लाको प्राकृतिक चमक हराउँदै जान्छ, जसको कारण अनुहारको चाउरीपन दिनदिनै बढ्दै जान्छ । कारण यो छ कि अनुहारमा कुनै पनि चमक देखा पर्दैन, त्यसैले मानिसहरूले बजारमा फेला परेको रा’सायनिक उत्पादनहरू बढी मात्रामा प्रयोग गर्छन् । जसले गोरोपन बढाउँछ तर क्रीम प्रयोग गर्न रोक्ने बित्तिकै त्यसको साइड इ’फेक्ट देखा परिहाल्छ, त्यसैले रासायनिक बढी मुल्य पर्ने उत्पादनहरूको सट्टा तपाईले घरेलु उपचारहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
यदि तपाईं आफ्नो कालो छाला हटाउन चाहानुहुन्छ भने यसका लागि हामी तपाईंलाई एउटा यस्तो उपाय बताउने छौं जुन तपाईंको छा’लालाई नोक्सान नगरी सुधार गर्दछ, आउनुहोस् जानौँ त्यो के हो त ? आजको पोस्टमा हामी तपाईलाई जुन चिजको बारेमा बताउने कुरा गर्दै थियौँ त्यो हो आलु । आलु एक यस्तो चिज हो । जसलाई हामी सब्जी बनाएर उपयोगमा लिने पनि गर्दछौँ । तर यसले खानबाहेक अन्य कुराहरु जस्तै त्वचालाई सुन्दर बनाउनमा पनि यसले काम गर्दछ ।
आउनुहोस् जानौँ काँचो आ’लुलाई त्वचाको लागी कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त ? यदि तपाई रातको सुत्ने समयमा आलुको टुक्रालाई काटेर आफ्नो अनुहारमा लगाउनुहोस् । यसरी लगाउनाले तपाईको अनुहारमा भएको कालो धाग धब्बा र पिम्पल्स हटेर जानेछ र अनुहारको रगं पनि बदलिनेछ । यदि तपाईको अनुहार कालो कालो छ भने पनि यो ढिलो ढिलो गरेर भएपनि हटेर जानेछ । यदि तपाई आफ्नो अनुहारको कालोपन हटाउन चाहानुहुन्छ भने पनि तपाई आलुको उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
यसको लागी तपाईले रातमा काँचो आलुलाई मिक्सरमा पिस्नुहोस् र यसमा १ चम्चा काँचो दुध मिसाएर पेस्ट बनाउनुहोस् । र यस पेस्टलाई रातको समयमा अनुहारमा राम्रोसँग लगाउनुहोस् र बिहान उठेर पानीले मुख धुनुहोस् । यस्तो गर्नाले तपाईको अनुहार चम्किनेछ । यदि तपाई आलुको पेस्टमा बेसन मिलाउनुभयो भने पनि यसले तपाईको त्वचालाई लाभ पुर्याउँदछ । यसले हाम्रो त्वचा अधिक मुलायम र सुन्दर बनाउँछ। यो एक प्राकृतिक घरेलु उपचार हो यसले कुनै पनि साइड इफेक्ट गर्दैन ।
Previous फेसबुकले गर्‍यो नाम परिवर्तन, नयाँ पनि सार्वजनिक
Next कोभिडसँगै बाँच्न सिक्दै दक्षिण कोरियाः खुल्न थाले रेस्टुरेन्ट, क्याफे र जिम हल